विवाहको गिफ्ट खोल्दा बम पड्केर दुलाहाको मृत्यु – rastriyakhabar.com
विवाहको गिफ्ट खोल्दा बम पड्केर दुलाहाको मृत्यु
सौम्य र रीमाको पारिवारिक पृष्ठभूमी
सौम्य र रीमाको एक वर्ष अघि मात्र टिकोटालो भएको थियो । रीमाको बुवा एक कपडा व्यापारी हुन् जसले रीमालाई आफ्नो भाईसँग मागेर पालेका थिए । उनलाई आफ्नो दुई छोराहरु पछि एक छोरी चाहिएको थियो र उनको भाइका तीन छोरीहरु थिए ।
सौम्य शेखरका आमा बुवा दुवै कलेल टिचर छन् । उनका बुवा जीव विज्ञान पढाउथे र सौम्यले कम्प्युटर विज्ञान पढेको थिए । दुई महिना अघिमात्र उनको बेङ्गलुरुमा एक जापानी इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम पाएका थिए । यो कम्पनीमा जानु अघि उनले चण्डीगढ र मैसुरमा इन्फो–टेक कम्पनीहरुमा काम गरिसकेका थिए ।
एक अपरिचित फोन कल
सौम्य शेखरका बुवा रबिन्द्र कुमार साहू(५७) ले भने “सौम्य बैङ्लुरुमा हुदाँ उनलाई एक पटक एक अपरिचित फोन आएको थियो । यो कल पछिल्लो वर्ष आएको थियो । रीमाले मलाई बताएकी थिइन कि दुई फोनमा कुरा गरिरहदाँ सौम्यलाई त्यो फोन आएको थियो । त्यो बेला सौम्यले रीमालाई होल्डमा राखेर उसँग कुरा गरे र पछि रीमालाई फोनमा उनलाई धम्क्याएको बताए । एक पुरुषले उनलाई फोनमा विवाह नगर्न धम्की थिएको थियो ।”
“त्यसपछि उनीहरुले त्यस्तो फोन आएको उल्लेख गरेनन् । यही दौरान दुबैको विवाह भयो । हामीले त्यो फोन कलको बारेमा पुरै बिर्सिसकेका थियौं ।”
यो हत्यालाई लिएर दुई दर्जन जाँचकर्ताहरुले चार अलग अलग शहरहरुमा तीनका साथीहरु र आफन्तहरु समेत १०० भन्दा बढी मानिसहरुसँग सोधपुछ गरिसकेका छन् । तिनले मोबाइल फोन कल रेकर्डको अनुसन्धान गरे र नवविवाहितहरुको ल्यापटप र फोनको पनि जाँच गरिसके ।
पुलिसले हालसम्म यो पार्सल रायपुरबाट पठाएको पत्ता लगाएको छ । यसमा गलत नाम र ठेगाना लेखिएको थियो । हत्याराले यसको लागि ४०० भारु खर्च गरेको देखिएको छ । साथै उसले धेरै सावधानीसँग कुरियरको छनौट गरेको देखिन्छ । कुरियर कम्पनीको वरपर कुनै सीसीटीवी क्यामरा लगाइएको छैन, साथै पार्सललाई स्क्यान पनि गरिएको थिएन ।
तीन वटा बस र चार जना कर्मचारी हुँदै पार्सल ६५० किलोमिटरको बाटो तय गरेर २० फेब्रुअरी पाटनगढ पुगेको थियो ।
कुरियर कम्पनीका स्थानीय म्यानेजर दिलीप कुमार दासले भने “ डेलिभरी–म्यान त्यही साँझ सौम्य शेखरको घर पुगेको थियो । तर त्यहाँ रिसेप्सन पार्टी चलिरहेकाले उसले सामान नदिइ फर्केछ ।”
अन्तमा उसले त्यसको तीन दिनपछि पार्सललाई गेटमा डेलिभरी गरेको थियो ।
फोरेन्सिक विशेषज्ञ यो बम कति शक्तिशाली थियो भनेर पत्ता लगाउनमा लागेका छन् । जाँचकर्ताको भनाई अनुसार यो सुतरीको डोरीमा बेरिएको अपरिस्कृत बम थियो जुन विष्फोट पछि सेतो धुँवा निस्केको थियो ।
प्रहरीको थप आशंका
प्रहरीले घटनालाई कतै तिरस्कृत प्रेमीले गराएको हो कि भनेर अनुसन्धान गरेको छ ।
साथै पुलिसले विवाहको केही दिन अघि सौम्य शेखरले किन आफ्नो फेसबुक एकाउण्ट डिलीट गरेर नयाँ अकाउण्ट खोले त्यसमा पनि जाँच गरिरहेको छ ।
के यो साहू परिवारको सम्पत्तीलाई लिएर भएको हत्या थियो ? जसको एक मात्र हकदार सौम्य शेखर मात्र थिए ।
के यो हत्याको सम्बन्ध रीमाको माध्यामिक स्कूलको दौरान भएको एक विवादसँग रहेको छ ? जब एक सहपाठीले उनलाई दुःख दिएको थियो र उनका बुवा आमाले यसको उजुरी स्कूलका प्रिन्सिपललाई दिएका थिए । तर यसको सम्भावना कमै रहेको छ किनकी यो घटना भएको ६ वर्ष भइसक्यो ।
पुलिसले यस घटनालाई महत्व दिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।(रातोपाटि)